Google Mepu inokuudza iko kupaka | IPhone nhau
Google Mamepu inogona kutokuudza kuti kuchinjisa traffic kuchange kuri munzira yauchazotora, asi… chii chinoitika kana wasvika kwairi kuenda? Zvinotaridza kuti iko kunyorera kuri kuda kupa, zvirinani, zano rakanaka nezvekuti pangave nenzvimbo yekupaka nekuda kwechinhu chitsva chakaonekwa mune yazvino beta vhezheni 9.44. Kuwanika kwenzvimbo munzvimbo yakasarudzwa kunoratidzwa mumadhigiri akasiyana: "nyore", "wepakati" kana "mashoma", nemamiriro ekupedzisira seayo ane yekupaka kushoma akaonekwa uye akajekeswa mutsvuku. Kamwe kufamba kwatanga, zvimwe zvakawanda zvinopihwa kuburikidza nemirayiridzo inoratidza kuti kupaka kwakatenderedza nzira yekuuya haisi "nyore, kazhinji" kana "kushomeka", semuenzaniso.
Waze uye INRIX vakatove vachikurudzira sevhisi yakafanana kubva munaGunyana apfuura, saka Google inogona kunge ichiedza kuve nechokwadi chekuti inongochengetedza iyo GPS yekushandisa application-up-to-date nezvimwe zvese zvasarudzo. Chishandiso cheWaze chinogona kutitsvagira yekupaka yemahara, zvisinei, sezvo ruzivo urwo rwuri kuoneka ruchienderera mberi, iyo Google Mepu application inongopa chete kutarisa mamiriro acho ezvinhu. Izvo hazvisati zvajeka kuti Google ichaunganidza sei iyi data nezvekuti ndedzipi nzvimbo dzemahara.
Mushure mekuverengeka bvunzo kurodha pasi dzakaitwa pachishandiswa, kuwanikwa kwekupaka hakuna kushanda chero mu
akaedza muParis. Kubva ars Technica hapana chinonzi chionekwe munzvimbo yeNew York / Long Island futi. Zvisinei, Android Police inovimbisa kuti ruzivo urwu runowanikwa munzvimbo dzeMadganis Parizvino, nzvimbo dzinoita sedzinogumira kumashopu ezvitoro, nhandare, uye dzimwe nzvimbo dzeveruzhinji, izvo hazvishamise kufunga kuti chiitiko ichi chiri mubeta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Mepu inokuudza kwaunopaka